Allbanaadir.com Kala Soco Warar Xaqiiqa ah - News: Yey matalayeen shaqsiyaadkii Dowlada Kenya kula shirtay Magaalada Nairobi ?
August 18 2017 15:36:34
Yey matalayeen shaqsiyaadkii Dowlada Kenya kula shirtay Magaalada Nairobi ?
Inta aanan qormadeyda bilaabin aan mar kale canbaareeyo Kenya oo halkeedii ka sii waddo hagardaamooyinkii ay awalba ku heysay Umadda Soomaalida iyo khiyaankooda. Taasi oo u danbeysay shirqool ay ku doonaysay in ay ku suuradxumeyso sumcadda beesha Sade (mariixaan), ka dib markii ay soo uruurisay shaqsiyaad ku fashilmay siyaasadda Soomaaliya iyo waliba dad qaxooti ah ku ah gudaha dalkeeda, kawaasi oo ay u dhiibtay warqad ay ku qoran yihiin waxyaabo ay daneynaysay.
Habdhaqankan foosha xun ee ay Kenya ku kacday, Ayaa waxa uu daliil cad u yahay inayan marna ka tanaasulin hagardaamooyinkeedii hore. Waxa uu sidoo kale habdhaqankani daliil kale u yahay inayan Kenya aqoonsaneyn dowrka Dowladda Federaalka ee ka dhisan Soomaaliya ee uu Madaxweynaha ka yahay Xasan Sheekh, Maxaa yeelay haddii ay dowladdaasi aqoonsan tahay Iyada ayey kala hadli lahayd waxyaabaha quseeya Soomaaliya.
Waxa uu sidoo kale habdhaqankani muujinayaa in Kenya ay bilowday siyaasad cusub oo saldhiggeedu yahay waxa loo yaqaanno qeybi oo xukun, Taasi oo in muddo ah ay ku dhaqmeysay dowladda Itoobiya ee cadowga ah. Siyaasaddan cusub, ayaa ah runtii mid qatar badan, Maxaa yeelay waxa ay Soomaalida ula dhaqmeysaa hab qabiil halkii ay ahayd in ay ula dhaqanto hab dowladeed sida dadyowga kaleba loo sameeyo.
Talaabadan ay Kenya qaadday ayaa waxa ay marqaati cad u tahay in Xasan Sheekh iyo dowladda uu madaxweynaha ka yahayba ay yihiin magac-uyaallo aan qiimo badan ka lahayn dhanka dowladaha dariska ah, Waayo haddii aysan taasi jirin Isagoo taagan looma gacandhaafeen dadkii uu madaxweynaha u sheegan jiray .
Haddaan dib ugu soo laabto su'aasha qormadeenna ah: Ma beesha Sade ayey matalayaan shaqsiyaadkii Kenya ay kula shirtay magaalada Nayroobi ee ay u dhiibtay warqadda lagu qoray af Ingiriisiga ? Jawaabtu waxaan leeyahay maya, Maxaa yeelay kuwaasi ma'ahan kuwo matalo beesha Sade, Anagoo faahfaahin doonno waxa aan sidaasi u leennahay.
Sidan soo sheegayba, Shaqsiyaadkaasi ma'ahan kuwa matalo beesha Sade, Maxaa yeelay waa marka koobaade, Beeshu waxa ay ka kooban tahay Jifooyin badan oo jifo kastaaba ay leedahay ugaas iyo nabadoon lawada yaqaanno, Kuwaasi oo ka shira arimaha masiiriga ah. Waa marka labaade, Beeshu waxa ay leedahay deegaan ay ku shirto, gaar ahaan marka ay ka hadlayso danaheeda.
Waa marka sedexaade, Beeshu waxa ay aqoosan tahay Dowladda Federaalka iyo dowrkeeda hogaamineed ee Dalka haba iska jilicsanaade. Waa marka afaraade, Beeshu waxa ay aqoonsan tahay maamulka gobolka (Gedo) iyo waliba kan ka jira degmooyinka ku yaallo dhanka xaduudda sida Belad-xaawo iyo Ceelwaaqa oo kale. Waa marka shanaade, Beeshu xiriir gaar ah lama lahan dalalka dariska ah, Kaasi oo ka duwan kan beelaha kale ee Soomaaliyeed.
Qodobada aan soo sheegay iyo kuwa kale oo lagu darayba, Waxa ay keenayaan in shaqsiyaadkaasi aysan matalin Beesha Sade. Waxay sidoo kale qodobodaasi ka dhigayaan shirkii ka dhacay magaalada Nayroobi mid aan quseynin Beesha. Tusaale ahaan, haddii ay Beeshu ka shireyso danaheeda ma waxa ay uga shireysaa gudaha dal shisheeye ? Aaway deegaanadii ay daganeyd iyo dalkeedii ? Beeshuse ma waxa ay deegan ku leedahay Nayroobi iyo dhul Kiikuunyo ?
Tan kale, Haddii ay Beeshu ka shireyso danaheeda, Sow ma'ahan in ay ku shirto gudaha dalkeeda iyo deegaanadeeda, Islamarkaana ay isu keento dadka waxgaradka ah ee u dhashay Beesha, Islamarkaana ku sugan gudaha Dalka sida Odayaasha dhaqanka, Culimada, Aqoonyahanka, Siyaasiyiinta, Haweenka iyo waliba Dhalinyarada. Goormayse Beeshu mataleen ganacsato iyo dad qaxooti ku ah dal shisheeye !!
Midda kale, Sidee Beesha u matalayaan shaqsiyaad ku fashilmay siyaasadda Dalka, Islamarkaana aan qaarkood cag dhigin deegaanadii ay ka soo jeedeen sida Gedo oo kale, gaar ahaan xilligii ay xilalka sare ka hayeen Dalka. Ma og tihiin in Cabdiwali Sheekh aanu marna booqan gobolka Gedo xiligii uu Ra'isulwasaaraha ka ahaa Dalka, Islamarkaana aan waxba ku soo kordhin Gobolkaasi ? Sideese shaqsi noocaas ah u matali karaa reer Gedo iyo beesha Sadeba ?
Tan kale, Sideebay Beesha heshiis ula geli kartaa dowladda Kenya oo ku eedeysan in ay gaboodfallo badan u geysatay dad ka soo jeeda Beeshaasi, Kuwaasi oo ku kala dhaqan gobolada Jubooyinka xilligii ay Kenya u hiilineysay Axmed Madoobe ? Aawayse xaqqa dadkii ay Kenya ku leysay magaalooyinka Kismaayo, Baardheere, Ceelcadde, Ceelgaduud, Dhamaso, Iridda iyo waliba deegaanka Khadiijo-Xaaji ? Dadkaasise Iyagu xurmo iyo xaq malahan miyaa ?
Haddii kuwaasi ay matalaan beesha sade, Maxay Kenya ugala hadli waayeen xaqa dadkii ay ku leysay gobolada Jubooyinka ? Ma garanaysaanse inta qof oo Reerkaasi ka soo jeedda oo ku baxaday gacanta Kenyaatiga? Mase og tihiin inta qof oo Mariixaan ah oo maanta ku xiran xabsiyada gumeystahan madow ee waliba fuliga ah.
Tan kalese, Sow ceeb ma'ahan in maanta beel Soomaali ah iyo dowlad shisheeye ay hashiis wada gaaraan xilli la leeyahay Soomaaliya waxaa ka jira dowlad la aqoonsan yahay ? Mise dadka aya la khiyaamayaayoo meesha dowladi kama jirto. Haddii aysan dowladi jirin maxaa dadka loo lugoynayaa oo xoolahooda (dekadda iyo ayrboorka muqdisho) canshuur ahaan looga qaadanayaa ? Haddii aan Soomaaliya la matlin yaa la matalaa ?
Shir ku sheegii Nayroobi, Waxa uu runtii u muuqaal eg yahay mid hadda ka hore ka dhacay magaalada Doolow Addo (doolow Itoobiya) sanadku markii uu ahaa 1996. Kaasi oo Itoobiya loogu ogolaanayey in ay duulaamo ku qaadi karto gudaha gobolka Gedo, Si ay markaasi u waxyeeleyso dad Soomaali ah oo ka soo horjeeday siyaasaddeeda guracan. Waxa uu sidoo kale ogolaanshaha waagaasi keenay dhibaatada ay Itoobiya maanta ka geysaneyso gudaha dalka Soomaaliya.
Haddaan nahay mufakiriinta iyo Waxgaradka beesha Sade, Waxaan Soomaaliweyn u balanqaadeynaa in beesha Sade aysan marna la mid noqon doonin sida qaar ka mid ah beelaha Daarood oo kale, Kuwaasi oo sharaf u arkay in ay dallaal ka noqdaan gumeysiga la gelinayo dalkooda, Si ay markaasi u helaan waxoogaa sandareero ah (dekado iyo waxooga garoomo) oo ay ku sabaansabaan hungurigooda baaxadda weyn ee u hogaansan cid kastoo shilimaad wadata.
Waan ku celinayaa mar kale, Beesha Sade waxa ay noqon doontaa haddii uu Rabbi idmo darbi ay dugsato Umadda Soomaalida ah oo runtii maanta marayso marxalad adag oo dadka kala saarta. Taasi oo dadka u kala saaraysa gumeysi-diid iyo gumeysi-kalkaal. Marxaladdan, Ayaa la mid ah tii soo saartay doorkii shariifka ahaa ee ay cayaartay beesha Dhulbahante, ka dib markii ay Beeshaasi garab istaagtay halgankii uu waday hogaamiyihii weynaa Sayid Maxamed Cabdille Xasan raxmatullaahi calayhi.
Gabogabadii iyo gunaanudkii, Haddaan mar kale isweyniino su'aasha qormadeena ah: Ma beesha Sade ayey matalaan shaqsiyaadkii ay Kenya kula shiray magaalada Nayroobi ? Jawaabtu waxaan leennahay mayya, Maxaa yeelay kuwaasi ma'ahan kuwo matalo Beeshaasi sababo badan oo jira awgeed oo aan intooda badani kor ku soo xusnay. Waxaan sidoo kale leeyahay, Shirkaasi ma'ahan mid quseeya beesha Sade, Maxa yeelay, waxa uu ka dhacay dal shisheeyee oo ah dalkii Beesha looga soo duulay.
Xasfiisk Shabakada Allbanaadir.com
· mamaan on April 30 2016 ·